Baadhida kansarka afka ilma galeenka | Zanzu
Baadhida kansarka afka ilma galeenka
Dheecaan muunad ah oo laga qaado afka ilma galeenka. Dhakhtarka waxa uu qaadaa dhaabidaad oo wadata burush yar. Dhakhtarku waxa uu u diraa baadhitaanka shaybaadhka si in dheeraad ah loo baadho. Baadhitaanka waxa loo istcimaalaa in lagu baadho cudurada sida kansarka ilma galeenka ama cudurka galmada lagu kala qaado(STIyada).
Xubnaha taranka gudaha ee haweenayda
Qabista STI aan la dawayn
Afka ilma galeenka